Talinayo Video Qaabka iyo Settings u huriyaan dab
> Resource > Video > talinayo Video qaabab huriyaan dab
Fadlan la soco in Amazon ayaa kaliya bilaabay hagaajinta ah ee nidaamka qalliinka Naarta ay Naarta OS 3.1 taas oo uu leeyahay is dhexgalka roon Goodreads ay. Ha iloobin in ay casriyayso aad OS iyo tijaabiso Screen cusub labaad taas oo la mid ah Chromecast ee mirroring oo ka kooban in aad TV.
Milkiilayaasha weyn ee dab ugu shidin hadda qulquli karaan videos carwooyin iyo TV ka kiniiniga ay xaq u gal TV oo kale! Si kastaba ha ahaatee, weli waxaad u baahan doontaa in ay laba-hubiyo qaab ama nooc ka mid ah video files si waa la jaanqaadaya si loo maqli noqon on your huriyaan dab hor inta aadan isticmaalin Labaad Screen. Waxaan ku qoran maqaalkan si uu idiin badbaadiyo waqti u cilmi baarista mid mid.
Qeybta 1: taageerayaan qaabab File u huriyaan dab
Qeybta 2: Best Video Meeshay u huriyaan dab
Qeybta 3: horena Video Settings u huriyaan dab
Kooban ee qaabab file taageeray waa sida ku cad hoos ku qoran:
3GP, 3G2, MP4, M4V, WEBM iyo MKV
AAC, Amr iyo Vorbis
Fiiri wixii faahfaahin dheeraad ah oo xaq HALKAN .
Goob ugu fiican ee aad Radidiyaha video files on dab ugu shidin waa in ay ku kaydi weel MP4 la goobaha hoos ku xusan:
Qaraarka: 1024 * 600
Rate Inyar: kbps 1500
Sida ku qoran baxay Qaybta 1, aad Radidiyaha karaa oo keliya doorasho xaddidan oo ah video files aad huriyaan dab. Si kastaba ha ahaatee, waxaad noqon doontaa si aad u daawato ka badan (ie AVI, VOB, MOV, wmv, RMVB iyo iwm) haddii aad u go'aansaday inaan badalo faylasha aad haatan ku jira ma socon, la awoodi Wondershare Video Converter Ultimate .
Waxa ay taageertaa ilaa 150 qaabab kala duwan iyo sidoo kale abuuridda iyo gubashadii ee DVD . Waxa uu helo xataa si fiican marka aad sidoo kale kala soo bixi kartaa jecel videos ama aad jeceshahay muujinaya TV qoraan goobta geeyo online ah oo caan ah.
Inkasta oo ay tahay ma adag tahay in la soo gaarto Converter video ah hadda, waa arin adag ilaa xad inay go'aan ka mid sax ah in u yeelan doontaa in ay buuxiso baahida videos aad ah. Gaar ahaan ka mid ah in la tayo leh sameecadda ah loogu badalo kartaa ilaa 30X dhakhso sidoo kale interface ah oo quruxsan weli user-friendly.
Intii ay waydiisan lahaayeen user ay u maraan oo dhan ka kaaftoomi qabo in ay aqbasho video ah isu dul dhejisaa, waxaa loo dhisay-in horena aad doorato qalabka iyo model ee faraha si aad u hesho.
Si fudud u jiidi-iyo-hoos u faylasha aad u gal interface ka dibna xaalkaa haddii aad rabtid in aad (ie jar, dalagga, isku shaandheyn iyo iwm) ka hor doorashada aad Qaabka Output ka presets ee la heli karo.
Fadlan nala fariin ka tagto ama aad la xiriirto naga Support kooxda 's wixii weydiimo kale. Waxaan noqon doonaa badan ku faraxsan yihiin inay maqlaan waxaad ka.